को हुन यी युवती ? जो ‘बोल्ड’ तस्विरका कारण भाइरल बनिन्, – Dailny NpNews
को हुन यी युवती ? जो ‘बोल्ड’ तस्विरका कारण भाइरल बनिन्,
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र २१, २०७७ समय: १५:५६:३९
पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा सुन्दर र हट तस्विरका कारण केहि महिलाहरु निकै भाइलर भएका छन् । यतिबेला सुन्दरताको कारण भाइरल हुनेको संख्या निकै बढ्दोक्रममा छ । सुन्दरताकै कारण एक सुन्दर युवती सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेकी छन् । नाम केतिका शर्मा हो । २४ डिसेम्बर १९९५ जन्मेकी केतिको शरीर निकै आर्कषक खालको छ । उनकाे सुन्दरताले युवाहरु अाकर्षित
सञ्जाल मार्फत भाइरल भएकी युवतीका कुनै मोडल या हिरोइन नभई सामान्य युवती उनको फलोअरको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ । सामाजिक सञ्जाल मार्फत भाइरल भएकी युवतीका कुनै मोडल या हिरोइन नभई सामान्य युवती हुन् । तर उनको तस्विरलाई हेर्दा यस्तो लाग्दैन् । यी युवतीकाे तस्विरले सामाजिक संजालमा निकै चर्चा कमाएकाे थियाे